Guangdong Qianjin Industrial dia mampiasa vola amin'ny fananganana tetikasa famokarana mangatsiaka 200 000 taonina / taona mipaka any Shizong, Yunnan - China Foshan Hermes Steel
Ny orinasa Guangdong Qianjin Industrial dia mampiasa vola amin'ny fananganana tetikasa famokarana mangatsiaka 200 000 taonina / taona mipaka any Shizong, Yunnan
Guangdong Qianjin Industrial dia mampiasa vola amin'ny fananganana tetikasa famokarana mangatsiaka 200 000 taonina / taona mipaka any Shizong, Yunnan
Tao anatin'izay taona faramparany izay, Shizong County dia nanaraka ny hevitra hoe "mameno ny rojo, manitatra ny rojo, ary manamafy ny rojo", miantehitra amin'ny tombony azo amin'ny famokarana vy tsy misy vy 1,575 tapitrisa taonina, mamboly mavitrika sy manitatra ny vy rojo indostrialy vy, ary miezaha manangana cluster indostrialy vy, ary miezaka manao Shizong The County Stainless Steel Industrial Park dia natsangana tao amin'ny tanàna vy tsy misy kilasin'i Yunnan any atsimo andrefany.
Araka ny drafitra, ny Shizong County Stainless Steel Industrial Park dia manana velaran-tany 279.76 hekitara ary tombana mitentina 7,81 miliara yuan. Tombanana fa amin'ny 2025, hahatratra ny vola azo amin'ny varotra 62.8 miliara yuan, tombony 1,1 1,1 miliara yuan, ary hetra 1,26 miliara yuan. Kasaina haharitra 3 ka hatramin'ny 5 taona ny fananganana ny Shizong County Stainless Steel Industrial Park ho lasa kinova nohavaozina amin'ny rojom-bidin'ireo indostria manomboka amin'ny akora, fandrendrehana, fikotrana mafana, fanodinana lalina mangatsiaka, ary vokatra vy maro karazana hananganana cluster indostrialy vy tsy misy fangarony amin'ny fiaramanidina.
Ny indostrian'ny vy tsy misy fangarony dia natomboka tamin'i Yunnan Tiangao Nickel Industry Co., Ltd., izay nahasarika ny fampiasam-bola tamin'ny taona 2009. Vita ny famokarana fanitsiana vy tsy vita ary napetraka tamin'ny volana Aogositra 2012. Rehefa nandeha ny fotoana, ny famerana indostrialy tokana sy ny indostrialy tsy lavorary ny fampiroboroboana sy ny fitomboan'ny indostrian'ny vy tsy manara-penitra an'i Shizong.
Mba hanomezana fahafaham-po ny tombony miavaka amin'ny famokarana vy vy tsy manjary 1.575 tapitrisa taonina, dia nanolotra ny Qujing Dachang Trading Co., Ltd., Chongqing Cuizhiyuan Enterprise Management Co., Ltd. ary ny Shizong County Fangwei Investment i Shizong County. ary Development Co., Ltd. amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola. Shizong County Wolaidi Metal Materials Co., Ltd., miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 870 tapitrisa yuan, dia hanangana tsipika famokarana mafana 1780mm milanja 1,4 tapitrisa taonina ary tsipika famokarana hafanana 1450mm 1450mm sy tsipika famokarana pickling. Nanomboka ny fanamboarana ny tetik'asa tamin'ny 29 Mey 2018 ary hovitaina amin'ny taona 2019. Vita ilay tetikasa ary napetraka tamin'ny 18 Oktobra 2010. Ny fahavitan'ny tetikasa dia nameno ny banga amin'ny famokarana vy maro any Yunnan. Voalaza fa ny tsipika famokarana mafana nataon'i Volody no andiam-pamokarana milina fanodinana steckel vaovao mivoatra tsy miankina any Sina. Izy io dia mandray ny haitao mandroso toy ny fanaterana mafana sy ny famahanana mafana ny takelaka, ny hatevin'ny rano, ny fifehezana ny sakany mandeha ho azy ary ny teknolojia mandroso amin'ny famokarana takelaka ao an-trano sy any ivelany. Manakodia ireo vokatra vy tsy misy fangarony avo lenta.
Ao amin'ny Shizong County Stainless Steel Industrial Park, Shizong County Wo Laidi Metal Material Co., Ltd. dia iray amin'ireo orinasa marobe ao amin'ny valan-javaboary vy tsy manara-penitra ao amin'ny distrika, ary rohy iray monja amin'ny rojo indostrialy vy io.
Amin'ny taona 2020, Shizong County Wolaidi Metal Material Co., Ltd. dia hamokatra coco vy 680.000 taonina isan-karazany, miaraka amin'ny sandan'ny vokatra 5 miliara yuan ary tombony 170 tapitrisa yuan. Mandritra izany fotoana izany dia nanolotra tamim-pahombiazana an'i Yunnan Jingzhong New Materials Co., Ltd. tamin'ny famoahana 200,000 taonina ny sakany mangatsiaka tery ary Guangdong Qianjin Industrial hampiasa vola amin'ny fananganana 200,000 taonina famokarana mangatsiaka mangatsiaka amin'ny sakany. tetik'asa, ary koa ny fanohanana ny fananganana fanetezana vy tsy misy fangarony, fanodinana herinaratra ary tsipika famokarana hafa. Ireo orinasan-vokatra vita amin'ny vy tsy milatsaka ambany dia mila manome takelaka vy, fantsona sns sns, izay mameno ny rojolon'ny fampandrosoana ny indostrian'ny vy tsy manara-penitra ary manokatra ny "kilaometatra farany" izay mametra ny fivoaran'ny fantsona tsy misy fangaron'ny distrika. indostrian'ny vy.
Miaraka amin'ny fanatsarana ny faritry ny indostrialy vy, Sichuan Guojinrong Metal Material Co., Ltd., Sichuan Pengzhou Zhongxin Metallurgy Co., Ltd., ary Chengming New Materials Co., Ltd. dia nanomboka ny fananganana tetikasa famokarana takelaka sy fantsona. Amin'izao fotoana izao dia manakaiky ny fahavitana ny fananganana atrikasa manara-penitra. Antenaina ho vitaina ary hapetraka amin'ny famokarana amin'ny volana Jona 2021.